Dad badan oo weeyn aa ku hareero | Informationsverige.se
Boggan waxaa la helayaa isagoo ah luqadaha soo socda:
Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah
Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha
Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon
Ku saabsan Iswiidhan
Waxa la dooran karo
In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan
Ka hor intaanad iman Iswiidhan
In la yimi Iswiidhan
In la codsado magan-gelyo
Maxaa raad ku yeesha fursadaha in la helo sharci daganaansho?
In la ahaado magan-gelyo doon
Xuquuqda xilliga wakhtiga magan-gelyada
Go'aanka codsiga magangelyo
Oggolaansho sharci daganaansho
In la shaqeeyo xilliga wakhtiga magan-gelyada
In la helo shaqo
Isu diyaari shaqo gudaha Iswiidhan
Bilow shirkad gaar kuu ah inta lagu jiro wakhtiga magan-gelyo doonka
Bilaaw barashada iswiidhishka
Sii baro iswiidhishka
La jirka kuwa kale ku tababaro swiidhishka
Liisas erayo iyo turjumid qoraal ah
Hoyga inta lagu jiro wakhtiga magan-gelyada
Hawlaha xilliga wakhtiga magan-gelyada
Caafimaad hel xilliga wakhtiga magan-gelyada
Haddii aad u baahato daryeel caafimaad.
Dhaqaalaha xilliga wakhtiga magan-gelyada
Bangi iyo xisaab bangi
Iskoolka xilliga wakhtiga magan-gelyada
Dib u mideynta qoyska
Adigaaga ka soo qaxay dagaalka ka jira Yuukrayn
Bilow noloshaada cusub ee Iswiidhan
Leysin gaari wedid Swiidhan gudeheeda
In laga shaqeeyo Iswiidhan
Barnaamijka sal-dhigashada ee Xafiiska Shaqada
Raadi shaqooyinka firaaqada
Kordhi fursadaada inaad hesho shaqo
Bilow shirkad gaar kuu ah
Hel shahaado iyo caddaynta aqoontaada
Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah, xanuusanayso ama dhaawac tahay
Shaqo iyo caruur
Sidan ayaad u helaysaa guri
Habab kala duwan oo loo dego
In la guuro
Sharciyada farxad ku noolaanta
Gobol iyo degmooyin
Dhaqaale, lacag iyo xisaabaadka
Taageero iyo kaalmo
Wax ka iibsiga dhanka intarnatka
Xuquuqda marka aad iibsato alaab iyo adeegyo
Heshiis, rukumasho, xisaabaha lacag bixinta iyo deynka
Bangi, adeegyada bangiga iyo adeegyada lacagta lagu bixiyo ee dijitaalka ah
Lacag u dirida qoyska
In waalid la ahaado
Canug 0-5 sano
Canug 6-12 sano jir
Canug 13-18 sano jir
Xilliga wakhtilummiska ilmaha
Xuquuq iyo waajibaad
Talo iyo taageero
Haddii aad leedahay waxbarasho dalka dibediisa ah
Hagida loogu talogalay adigaaga haysta waxbarasho dalka dibediisa ah
Dhaqaaleyaqaanno iyo maamulyaqaanno
Injineerro, farsamoyaqaanno iyo aqoonyahanno kombiyuutar
Macallimiin iyo barbaariyeyaal
Xayawaanka iyo dabiicadda
Xirfadaha daryeelka caafimaadka iyo jirrada
Bulsho iyo habdhaqan-yaqaan
Sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah
Dheeraynta sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah
Maxay sameeyaan hey'adaha dawladeed ee kala duwan?
Gaadiid dad weyne
Ku saabsan fayraska koroona
Sidee ayuu covid-19 raad ugu yeelanayaa caafimaadkayga?
Sidee ayuu covid-19 raad ugu yeelanayaa xaaladayda nolosha?
Tani waa sida aad isaga qaban karto wararka beenta ah
Waxbarashooyinka kala duwan
Kaalmada iyo amaahda laga helo CSN
Da’ yar iyo Iswiidhan
Goobaha internetka ee leh macluumaad, talo iyo taageero
Xilli firaaqaha, dhaqanka iyo nolosha jaaliyadaha
Haddii aad ka weyntahay 65 sanno
Hoos u dhac awooda laxaadka ah
Daryeel iyo caafimaad
Haddii aad u baahantahay daryeel caafimaad
Ku maqnaanshaha xanuun
Farmasiyada iyo dawooyinka
Naftaada ku dadaal
Khamriga, daroogada, maadooyinka jirka, tobaakada iyo khamaarka (ANDTS)
Soo booqdayaal ka yimi dalka dibediisa
Xilli firaaqo, dhaqan iyo nolosha jaaliyadaha
Loo gaystay dhibaato
Qiimeynta inta ay tahay da'daadu
Sharciga dugsiga sare
Haddii aad u baahato daryeel caafimaad
Dad badan oo weeyn aa ku hareero
Haddii aad tahay magan-gelyo doon oo aad noqonayso 18 sano
Dhaqaalaha, lacagta iyo xisaabaadka
Imaansha dalka Iswiidhan
Iswiidhan – dimoqraadiyad iyo dawlad qaanuun leh
Dawlad dadkeeda daryeesha
Dawlad dadkeeda daryeesha horumarkeeda ku salaysan xuquuqda bani’aadamka iyo sinaanta
In loo soo guuro Iswiidhan
Aqoonsi iyo dhaqan
Daganaanshaha dalka Iswiidahn
Sidee ayaa dadku u degganyahay?
Xuquuqda iyo waajibaadka hoygaaga
Dadka iyo hey’ad dawladeed
La xiriirka hey’addaha dawladeed
Booliiska doorkooda dhinaca bulshada
Dhaqanka iyo wakhti firaaqaha
Qoyska- iyo hawlaha carruurta
Dadka iyo deegaanka
In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan
Suuqa shaqada Iswiidhan
In la raadiyo shaqo
In cid loo shaqeeyo
Cashuur iyo caddaynta dakhliga
Waxbarashada dadka waaweyn
Adeegga bulsho ee noloshaada maalinlaha ah
Xuquuqda iyo waajibaadka qofka
Waa maxay xuquuqda bani’aadanimada?
Haweenka xuquuqdooda iyo sinnaanta
Xuquuqda dadka leh hoos u dhac awoodda laxaadka ah
Hbtqi-dadka ah xuquuqdooda
Xuquuqda loogu talogalay dadka laga tiro badanyahay iyo dadka asal ahaan ugu soo horeeyay dalkan
In qoys la dhiso oo lala noolaado carruur gudaha Iswiidhan
Carruurta xuquuqdooda iyo Heshiiska Xuquuqda Carruurta
Haddii qoysku u baahdo taageero
Muxuu sameeyaa adeegga arrimaha bulshada?
Nidaamka iskoolka Iswiidhishka
In la haysto carruur ku jirta iskoolka
Saamayn ku yeelanshada Iswiidhan
Waa maxay dimoqraadiyad?
Sidan ayaa loo hogaamiyaa Iswiidhan
Nidaamka doorashada Iswiidhishka
Dad badan waa inay qaybsadaan awoodda
Waa muhiim inaynu ka fikirno cidda ka dambeysa war
Daryeelidda caafimaadka ee dalka Iswiidan
Waa maxay caafimaad?
Maxaad samayn kartaa adigu si aanad u xanuusan?
In si sax ah wax loo helo dhanka daryeelka caafimaadka
Xuquuqda iyo waajibaadka dhinaca kulanka lala yeesho daryeelka caafimaadka
Xaqa loo leeyahay jir gaar ah
In waayeel lagu noqdo dalka Iswiidan
Bulshada loogu tala galay wayeelka
Hawlgab iyo taageerada dhaqaale ee kale
Markii qof u geeriyoodo
Ku saabsan Informationsverige.se - Ku hagaha bulshada Iswiidhan
Ku saabsan boggan intarnat-ka
Ku saabsan luuqadaha yar yar ee qaranka ee gudaha Iswiidhan
Bogga Informationsverige.se waxaan isticmaalnaa anagga cookies si aan kuu siino isticmaal wanaagsan. Adigoo horey u sii baaraya waxaad aqbalaysaa cookies Faahfaahin dheeri oo ku saamsan cookies akhri.
Anigu waan oggolahay
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / Dad badan oo weeyn aa ku hareero
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 31 5 2018
Waxaad la kulantaa dad waa weeyn ee badan oo kale duwan, oo ka mas'uul ah wax yaalo kala duwan ee kuugu saaban. Waa adkaan karta in aad ogaato qofka xakumo ama qofka ka jawaabi karo su'aalaha aad qabto.
Waxaa xaq uu lee dahay in aad sheegto waxa aad qabto, waxaana xaq uu lee dahay in lagu dhageeysto. Haddii aad heeysato turjumaan, waxaa xaq uu lee dahay in aad badasho haddii aad uu aragto in sii fiican kuugu kala socon turjumaanka aad heeysato. Turjumaanka waxaa saaran waajibka sir qarinta.
Dad qarkood waxaa xariir la lee dahay inta aad tahay magangalyo doon. Marka aad hesho sharcigaada ee daganashaaha, waxaa joojineeysaa in aad la kulanto dad qarkood, waxaana badalkaas xariir la heleeysaa kuwo cusub.
Gacanyaraha hey'adda socdaalka
Hey'adda socdaalka waxaa ka shaqeeya gacan yare aad la kulmeyso marka aad la kulmeyso marka aad magangelyo doon tahay.
Waxaad ka jawaabi doontaa su'aalo ku saabsan:
marka aad dhalatay.
meesha ee daganyihiin waalidkaada iyo talefoon lambarkooda.
meesha aad adiga ka timid.
afka aad adiga ku hadasho.
sida aad Iswiidhan ku timid.
sababta aad uga soo tagtay dalkaada hooyo.
sida aa tahay.
Shaqaaluhu waxeey ku weeydiinayaan si eey kuugu qoraan nidaamka kombiyuutarka ee hey'adda laanta socdalka. Kadib dalabkaada shaqaadiisa ee sii wadaayaan. Hey'adda laanta socdalka muhiim ee uu tahay in ee ogaadaan sababaha aad uu sii dagnaan karin dalkaada hooyo iyo sida uu caafimaadkaada hada yahay. Haddii aada rabin in aad la hadasho shaqaalaha waa dhihi kartaa maya. Haddii aad sheegi karin ama aada rabin aad shaqaalaha wax uu sheegto hada, gor danbe ayaa markasto la xariiri kartaa hey'adda laanta socdaalka. Waad sameeyn karta xattaa hadii ee jiraan wax adiga walacsantahay ama haddii aad su'alooyin kale qabto.
Sababte ayee shaqaaluhu wax iiga weeydiinayaan reerkeeyga?
Muhiim ayee tahay in hey'adda laanta socdaalka ogaato qofka ee hooyadaa iyo aabahaa yiihin iyo meesha ee joogaan. Hey'adda laanta socdaalka waxeey sida oo kale rabaan in ee ogadaan habka ee uu la xariiri karaan. Qeeybta dalabka waxaad caawinaad ku heli kartaa in aad wacdo reerkaada ama qaraabo kale oo aad uga waramto meesha aad joogto iyo sida aad tahay.
Caruurta Iswiidhan dhan waxeey xaq uu lee yihiin in ee dhigtaan iskuul. Iskuulka waxaa joogo dad weeyn oo kala duwan. Tusaale ahaan waxeey ahaan karaan macalimo, maamulhaye, macalimo gaar ah ama shaqalaha cunto karinta.
Iskoolka sido kale waxaa joogo daryeelka caafimaadka iskuuleed oo inta badanaa ka kooban kaalkaaliso caafimaad iyo la taliye.
Macalinkaada fasaleed waxuu la shaqeeyna macalimooyinka maadooyinka iyo macalinka afka hooyo ama qofka kuugu caawinaayo afkaaga hooyo si aad uu hesho dhigashada iskooleed ee ugu suurta galsan.
Shaqaalaha iskuulka ayaa ku hoowl leh, ayadoo lagu kaashanaayo, in ee xakumaan waxa adiga uu fiican waxbarashadaada.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan iskoolka iyo shaqaalaha iskoolka.
Xoghaye bulsho iyo Adeeega bulshada
Da' yarta kali socodka ah waxeey xaq uu lee yihiin isla fursada caawinada iyo taageerada laga helo Adeega bulshada, sidii caruurta meel lageeyay oo kale. Caruur meel la geeye waa tusaale ahaan caruurta dagan guriga xanaanada caruurta ama degaan daryeel ama daganaasho (HVB).
Adeega bulshada ayaa ka mas'uul ah in aad hesho degaan aamin ah oo leh fursad taageero iyo horumar. Adeega bulshada ayaa ka mas'uul ah in ee ogaadaan baahida aad qabto. Tusaale ahaan waxeey ku saabsanaa kartaa waxbarasho, daryeel bukaan-caafimaad iyo daryeel ilko.
Xoghaya bulshada ayaa ayadoo ku kasheneeyo adiga, wakilkaada ama mas'uuliyaha xanaanada iyo shaqaalaha deegaanka, soo sareeyso qorsho taabo galin. Qorsho nuucaas ah waxuu tilmaama caawinaada iyo taageerada aad uu baahan tahay iyo habka aad uu heleeyso caawinaadaas iyo taageeradaas.
Waxaa xaq uu lee dahay in aad wax ka ogaato qorshahaada taabo galineed iyo waxa uu ka kooban yahay iyo in aad ka qeeyb qaadato iyo in aad ka sheegta waxaa ka qabto. Xoghaya bulshadeed waxee dhageeysanee waxaad qabto oo sheegeeyso, waxeeyna ku dareeysaa go'aanka waxyaalaha aad jeclaan leheed. Taas mecneeheed ma ahan in markasto heleyso sida aad adiga rabto. Xoghayaha bulshada waxee ku fakaree waxa adiga ku fiican, go'aankana taas ee ka soo saaree.
Markaad bilaawga Iswiidhan timaado iyo Hey'ada socdaalka firineeyso, go'aana ka soo gaareeyso dalabkaaga magangalyo, waxaa xariir la lahaan doontaa qof loo yaqaan Wakiil. Qofka wakiilka ah waxuu ahaan karaa naag ama nin. Marka aad 18 sano gaarto ama markaad hesho sharciga daganashaha, qofka wakiilka ah ma ku sii ahanaayo wakiil.
Wakiilka wax yaalo kala duwan uu kuugu caawinaa. Tusaale ahaan marka aad la hadleeyso hey'adda socdaalka ama haddii aad dalbaneeyso lacag maalmeedka oo aadna ka yar tahay 16 sano. Wakiilka waxuu tusaale ahaan xakuumaa habka loo isticmaalaayo lacagtaada, mesha aad dageeyso iyo wax kaste ee kale oo koogu saabsan oo adiga xakumi karin, sidii waalid uu ahay dhalinyaro ka yar 18 sano. Waxaa markasto xaq uu lee dahay in aad sheegto sida aad qabto oo ku saabsan wax yaalo kale duwan ee ku khuseeyo, waxaana xaq uu lee dahay in lagu dhageeysto. Mecnaheedu ma ahan taas in aad go'aamin karto laakin mecnaheedu waa in wakiilka uu tixgeliyo sida aadwax u aragto.
Wakiilka waxuu ka masu'uul yahay in iskuulka laga diiwan galiyo iyo in uu iskuulka xariir la heeysto sidii waalid uu sameeyn lahaa oo kale. Waxeey tusaale ahaan ahaan karta marka la qabo wadahadalka hormarida ardayga ama wadahadalka shakhsiyeed oo ku saabsan isbarida iskuulka.
Kalkaaliye sharciyeed waa qof yaqaan sharciyada Iswiidhan, waa qof xeer yaqaan ah ama qareen. Ayada ama asaga waxuu kuu cawinaa dalabkaaga magangalyo. Sido kale kalkaaliyaha sharciyeed waxuu kula joogaa marka aad la kulmeeyso Hey'adda socdaalka oo aad uga warameeyso sababta aad magangalyo uu soo dalbatay.
Mas'uul xanaaniye gaar loo shaqaaleeyay
Marka aad sharciga daganaashaha hesho, badalka wakiilka waxaa heleeysaa mas'uul xanaaniye gaar loo shaqaaleeye. Guddiga bulshada ee degmadaada ayaa ka masu'uul ah si aad uu hesho mas'uul xanaaniye gaar loo shaqaaleeye. Haddii aad 18 sano gareeyso lix bilood gudaheed, waxeey noqon kartaa in aad wakilkaada sii heeysato.
Mas'uul xanaaniye gaar loo shaqaaleeye waxaa lagu magacaabaa haddii ee waalidkaada dhinteen ama haddii ee san ku xanaaneeyn karin (tusaale ahaan haddii ee san Iswiidhan kula imaan).
Mas'uulka xanaaniye gaar loo shaqaaleeye waxuu mas'uul ka ahay in aad hesho wax yaalaha aad baahida uu qabtoo. Qofka waxuu ahaan qof haboon och tusaale ahaan dhiib karo xanaano, amaan iyo tarbiyeen fiican. Mas'uul xanaaniyaha, waxuu xaq uu lee yahay, wajibna ka saaran yahay in uu xakumo wax yaala ku saabsan. Waxaad xaq uu lee dahay in aad sheegato waxa aad qabto iyo in lagu dhageeysto.
Shaqalaha joogo deegaanka waxeey kuugu caawinaayaan howl maalmeedkaada, waxeeyna la soconaayaan in aad nabad qabto. Waxeey ku saabsanaa kartaa caawinaad cashareed, cunto karis, dhardhaqid iyo in laguugu caawiyo helida howlo aad jeceshay oo qaban karto waqtiga firaaqada. Ula jeedada ma ahan in shaqalaha wax kasto kuu qabto ee, ayadoo da'daada ku xiran tahay, ula jeedada waa in laga caawiyo wax yaalaha qaarkood iyo laga tageero in aad kaliga qabato wax yaalo kale. Shaqalaha waxuu kuugu caawin karaa in aad isku diyaariso degaan gaar ah marka aad weeynaato.
Shaqaale ayaa jooga afar iyo laabatanka saac, haddii aad uu baahato caawinaad wax uun ama aad rabto uun inaad hadasho.
Kuwo kale oo dadka waaweyn ah
Xilliga fasaxaaga waxaad la kulmi kartaa dad kala duwan.
Beeraha fasaxa kuwa ka shaqeeya waxaa ka mid ah macallimiinta fasaxa iyo hogaamiyayaasha fasaxa. Waxey iskuduba ridayaan howlo kala duwan oo ka dhaca ee beerta safaxa. Waxaad u tagi kartaa shaqaalaha haddaad u baahato talo iyo kaalmo.
Degmooyinka qaarkood waxaa ka shaqeeya xogheynta dibadda/gacanyaraha dibadda. Waxey u shaqeeyaan degmadda si ay xilli hore wax ugu qabtaan dhibaatooyinka dhalinyarada, si aad caawinaad u hesho. Gacanyarayaasha dibadda waxey joogaan meesha ay dhalinyarada iyo carruurta ay joogaan; xaafadda aad degentahay, iskuulka, beerta fasaxa, iyo internetka.
Socdaha habbeenkii waa dad waaweyn oo aad la kulmi karto xilliga fasaxaaga. Waa dad waaweyn oo socdawadooyinka fiidka iyo habeenkiisi ay u ahaadaan kaalmo bulsho ee dhalinyarada. Waxaad ku garaneysaa scdaha habeenkii jaakooyinkooda midabka leh.
Akhri dheeraad ku saabsan gacan-yarayaasha goobta kuna qoran bogga Koll på Soc. Warbixintan waxay ku qorantahay Iswiidhish oo keliya.
Wixi dheeraad ah ka akhri Hey'adda Socdaalka bogeeda intarnatka looguna talogalay caruurta magan-gelyo doonka ee keligood ah. Warbixinta waxaa lagu helayaa Iswiidhish iyo Ingiriisi oo keliya.
Cid kale la qaybso boggan: Facebook Telegram Email WhatsApp
Informationsverige.se waa maamulka gobolada boggooda oo leh macluumaad ku saabsan Iswiidhan oo loogu talogalay adigaaga ah magan-gelyo doon ama dhawaan helay sharciga deganaanshaha.
Facebook-ga nagala soco
© Copyright 2022 Länsstyrelsen Västra Götaland